Volvo Car Myanmar ၏ ၅ နှစ်မြောက် နှစ်ပတ်လည် အစီအစဉ်ကျင်းပ! - Drive Myanmar
Drive Myanmar > News > News > Local Updates > Volvo Car Myanmar ၏ ၅ နှစ်မြောက် နှစ်ပတ်လည် အစီအစဉ်ကျင်းပ!
၅ နှစ်မြောက်အထိမ်းအမှတ်အဖြင့် Volvo Car Myanmar မှ ဖော်ပြပါအခွင့် အလမ်းများကို ဝယ်ယူသူများအနေဖြင့် ရရှိနိုင်ပါမည်။
– ကားဝယ်ယူမှုတိုင်းအတွက် ထူးခြားသော ဈေးနှုန်များဖြင့်ရရှိနိုင်မည့် အခွင့်အရေး (သက်မှတ်ထားအရေအတွက်ကုန်သည့်အထိသာ)
– 20% down payment ၊5Yrs Installment ၊ 10% Interest (p.a)
– Central Bank Of Myanmar ၏ Exchange rate နှုန်းဖြင့်သာ ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါမည်။
၅ နှစ်မြောက် အထိမ်းအမှတ်အစီအစဉ်ကို ၂၈ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၂ အထိသာ သတ်မှတ်ထားသောကြောင့် Volvo Car ချစ်သူများနှင့် စိတ်ဝင်စားသူများ လာရောက်လေ့လာ၊ ဆက်သွယ်မေးမြန်း ဝယ်နိုင်ပါကြောင်း သတင်းကောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက Volvo Car Myanmar Hotline YGN 099 650 86586, Hotline MDY 099 641 86586 နှင့် Facebook Inbox မှလည်း စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
PREVIOUS 17 Feb 2022
Chevy Spark ၏ ထုတ်လုပ်မှုအားယခုမှုအား ယခုနှစ်နွေရာသီအကုန်ခန့်တွင် ရပ်ဆိုင်းမည်။
NEXT 21 Feb 2022
ထူးခြားသည့် Performance SUV အနေဖြင့် ထွက်ရှိလာသည့် 2023 Aston Martin DBX 707